निजी विद्यालयका शिक्षकहरु भन्छनः ‘हामीलाई शोषण गरियो’
Published: January 24, 2016 13:50 PM
जनकपुरधाम, माघ १० । धनुषा जिल्लाका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले सञ्चालकले विद्यालयलाई कमाउने थलोका रुपमा परिणत गरेको आरोप लगाएका छन् । निजी विद्यालय शिक्षक सङ्गठनद्वारा आइतबार आयोजित क्षेत्रीय भेलामा सहभागी शिक्षकले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र नदिइएको, आर्थिक अवस्था सुधारको कुनै योजना नभएको,...
शहीद सप्ताह आजबाट सुरु
Published: January 24, 2016 09:59 AM
काठमाडौं, माघ १० । यस वर्षको शहीद सप्ताह आजबाट सुरु भएको छ । हरेक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ । तत्कालीन राणा शासनविरुद्ध जनचेतना फैलाउने शुक्रराज शास्त्रीलाई विक्रम संवत १९९७ साल माघ १० गतेका दिन टेकुको पचलीमा रहेको रूखमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । यसैगरी...
बिद्युतीय शव दाहगृह आजदेखि संचालनमा
Published: January 24, 2016 16:26 PM
काठमाडौं, माघ १० । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह गृह आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलले एक कार्यक्रमबीच आइतबार विद्युतीय शवदाह गृहको उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विद्युतीय शवदाह वातावरण मैत्री हुने भन्दै यो प्रविधिले पशुपति परिसरको प्रदुषण नियन्त्रणमा सहयोग मिल्ने बताए । मन्त्री पोखरेलले पशुपति...
चुरे क्षेत्रका खेती योग्य जमिन बगरमा परिणत
Published: January 24, 2016 08:54 AM
सिन्धुली, माघ १० । सिन्धुलीको कमलाखोच र मरिण क्षेत्रमा अवस्थित चुरे पहाडमा भइरहेको दोहनका कारण त्यस क्षेत्रको उर्वर खेती योग्य जमिन क्रमश बगरमा परिणत हँुंदै गएको छ । खेती योग्य जमिन बगर बन्न थालेपछि मरिण क्षेत्रको मानव बस्ती समेत जोखिममा परेको छ । कमलाखोच क्षेत्रको दुधौंली नगरपालिकाको टाँडी, हर्षाही, निपाने, रानीवास,...
रंगेली घटनाको विरोधमा लिम्बुवानले गर्‍यो यातायात बन्दको घोषणा
Published: January 24, 2016 13:08 PM
सुनसरी, माघ १० । मोरङको रंगेली घटनाको विरोध गर्दे लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आज(आइतबार) पूर्वका नौ जिल्लामा यातायात बन्दको आह्वान गरेको छ । यातायात बन्दको कारण मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, पाँंचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभा जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेका छन् । यातायात...
Published: January 24, 2016 11:41 AM
काठमाडौं, माघ १० । माघ विदेशबाट फर्किंदा श्रीमती अन्तै– वैदेशिक रोजगारबाट दीपक मिजार चार महिनाअघि घर फर्किए । खाडीमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा उनले नियमित श्रीमतीलाई पठाउँदै आएका थिए । तर, तीन वर्षपछि फर्किंदा श्रीमती सँगै बस्न मानिनन् । अर्को व्यक्तिसँग प्रेमसम्बन्ध रहेकी श्रीमतीले सम्पत्तिसमेत लगेको भन्दै दीपक उजुरी लिएर...
डोल्पाको विकासका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ : प्रधानमन्त्री
Published: January 24, 2016 07:30 AM
काठमाडौं, माघ ९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डोल्पाको विकासका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् ।डोल्पो समाजले शनिबार राजधानीमा गरेको सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले माथिल्लो डोल्पासम्म विकासको लहर फैलाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए ।कार्यक्रममा डोल्पो समाजको राजधानीको आरुबारीस्थित तीन रोपनी एक आना जग्गामा...
पोखराको सुपरमार्केटमा छिरेको चितुवा १२ घन्टापछि बाहिर निस्कियो
Published: January 23, 2016 17:17 PM
पोखरा, माघ ९ । पोखरा नगर क्षेत्रको एउटा सुपरमार्केटभित्र छिरेको चितुवा झन्डै १२ घन्टापछि बाहिर निस्किएको छ ।पोखरा उपमहानगरपालिका–१ बगरस्थित विन्ध्यवासिनी स्टोर्समा शुक्रबार दिउँसो साढे दुई बजेतिर पसेको चितुवा शनिबार बिहान २ बजेतिर बाहिर निस्किएको हो ।शुक्रबार दिनभर नियन्त्रणमा लिन नसकिएपछि सटर बन्द गरेर राखिएकोमा राति...
विश्वविद्यालय र उच्च मावि तहमा ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने तयारी
Published: January 23, 2016 16:09 PM
काठमाडौं, माघ ९ । यस वर्षदेखि एसएलसीमा ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले अब विश्वविद्यालय र उच्च माध्यमिक तहमा पनि ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ । विश्व विद्यालय र उच्च माविमा ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने विषयमा नौ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, उच्च माध्यमिक शिक्षा...
सरकारले तारादेवीको सम्मानका लागि पुरस्कारको स्थापना गर्नेछः मन्त्री राई
Published: January 23, 2016 15:29 PM
काठमाडौं, माघ ९ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले मुलकमा देखिएको समस्या चाँडै अन्त्य हुने दाबी गरेका छन् । स्वर किन्नरी तारादेवीको दसांै स्मृति दिवसको अवसरमा राजधानीमा गरिएको कार्यक्रममा उनले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले सबै दलसँंगको बार्तालाई तिव्रता दिएको बताए । मुलुकमा...
Published: January 23, 2016 12:57 PM
पाँचथर, माघ ९ । जनसचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूमा एचआईभी एड्स सङ्क्रमित हुने क्रम रोकिएकोे छैन । गत साउन यता छ महिनाको अवधिमा पाँच जनामा ‘एचआईभी पोजेटिभ’ देखिएको र उनीहरु सबै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरु रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । ...
Published: January 23, 2016 12:51 PM
विराटनगर, माघ ९ । संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा मोरङले रङ्गेली घटनाको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चामा आवद्ध सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवले मृतकलाई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय...
सवारी अनुमतिपत्र वितरणमा ‘बिचौलिया’हरुको दादागिरी(भिडियो हेर्नुहोस)
Published: January 23, 2016 12:58 PM
बुटवल, माघ ९ । बुटवलमा सवारी चालक अनुमतिपत्र बितरणमा व्यापक अनियमितता भएको छ । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित रुपमा सबारी चालक अनुमति पत्र बितरण गर्न नसक्दा हप्ता दिन लाइनमा बस्दा समेत सेवाग्राही रित्तै हात फर्कन बाध्य छन् । कर्मचारीको मिलेमतोमा बिचौलीयाको काम रातीमा कार्यालय खोलेर गरिने प्रबृति बढेसंगै दिनभर...
तीनजनाको मृत्यु हुनेगरी कसरी घट्यो रंगेली घटना, के छ अवस्था ? (भिडियो)
Published: January 23, 2016 14:57 PM
बिराटनगर, माघ ९ । प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको घटनापछि मोरङ रंगेलीको जनजीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । एमाले निकट युवा संघले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम गर्ने धोषणा गरेसंगै रंगेलीमा तनावको स्थिति बन्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर स्थिति तनावमा मात्र सिमित रहेन बिहीवार अपरान्ह रंगेलीले...
श्री स्वस्थानीको ब्रत सुरु
Published: January 23, 2016 14:00 PM
काठमाडौं, माघ ९ । हिन्दू धर्माबलम्बीहरुले आज(शनिबार)देखि श्री स्वस्थानीको ब्रत सुरु गरेका छन् । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु हुने ब्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना चल्दछ । माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म हुने ब्रत अवधिमा हरेक दिन नित्य मध्याह्न कालमा भगवान शिवको आराधना गरिन्छ । यस अवधिमा माछा मासु नखाई नुहाई धुवाई गरी...